Akụkọ - Etu esi eji iko elele elektrọnik Glass CW27 nke ọma
Arọ Ibu Elektrọnik CW275bụ ọkwa dị oke nkenke nwere ihe mmetụta 4 nwere mmetụta dị oke egwu, nke nwere ike tụọ ịdị arọ gị nke ọma, mana ị ga-elebara anya iji ya mee ihe nke ọma, ma ọ bụghị ya, ịdị arọ ga-ele mmadụ anya n'ihu ma metụta nha ahụ. Yabụ kedu ka ị ga -esi jiri Glass Electronic Weight Scale CW275 tụọ ibu n'ụzọ ziri ezi?
1. Nke mbụ, ekwesịrị idobe oke ibu na ala dị larịị, ọ bụghị n'elu kapeeti ma ọ bụ ala dị nro, ọ bụghị n'ebe enwere oke nha ma ọ bụ dị ala, ọ bụghịkwa n'ime ụlọ ịsa mmiri dị mmiri mmiri, n'ihi na ọ bụ ngwaahịa elektrọnik.
2.Oge ịtụ ihe na ịkwụ ọtọ ga -abụrịrị eziokwu. Kewapụ ụkwụ abụọ ahụ n'emechighị ihuenyo ngosi. Jiri otu ụkwụ kwụrụ ọtọ, were kwụrụ otu ụkwụ ọzọ. Amala jijiji ma ọ bụ wụpụ n'ọkwa. Ejila akpụkpọ ụkwụ, gbalịa jiri uwe ole na ole tụọ aro ka ị bịaruo oke gị nso.
3. Mgbe ị biliri ọtọ, ihe ngosi ga -agụ ihe, ọ ga -agụkwa ọzọ mgbe ọkụ nwesịrị ugboro abụọ, nke bụ ibu gị. Mgbe ahụ gbadata ọzọ wee tụọ ọzọ, ọ bụrụ na data ahụ dị ka ọ dị na mbụ, ọ bụ ibu gị n'ezie.
4. Enwere isi ụkwụ anọ na azụ nke nha maka ịtọ ala. Nke a bụ akụkụ bụ isi nke ịtụle, ngwaọrụ na -atụ ihe mmiri. Ụkwụ anọ a ga -arụrịrị ọrụ n'otu oge iji tụọ nke ọma.
5. N'etiti ụkwụ anọ, enwere ebe batrị, nke a na -eji arụnye batrị na -arụ ọrụ nke ịdị arọ yana ekwesịrị dochie batrị na oge. Mgbe batrị gwụsịrị, uru a tụrụ atụ agaghị abụ nke ziri ezi. Ọ bụrụ na batrị ejirila ogologo oge, ọ ga -awụfu mmiri wee mebie sekit ahụ. Biko biko dochie batrị n'oge.
6.Lezienụ anya na oke nha nke ịdị arọ. Oke nke ịdị arọ a bụ kilogram 180. Atụla ihe karịrị oke. Ma ọ bụghị ya, ị gaghị enwe ike tụọ ịdị arọ gị, ọ nwere ike tufuo oke ibu gị. Yabụ mgbe ịzụrụ ya, ị kwesịrị ilele nha nha ga -adabara gị.
Ọ dị mkpa ịzụlite omume gị kwa ụbọchị, ma nwee ibu n'otu oge, wee mee ndekọ ndị kwekọrọ.
Maka nlele ogologo oge, ị nwere ike were nkezi otu izu ma ọ bụ ọkara ọnwa maka ntụnyere, n'ihi na mgbanwe kwa ụbọchị dị obere.
Nke gara aga: Ọnụ ego dị ọnụ ala nke itinye ego n'ụlọ nkwari akụ na ntiwapụ abịabeghị
Osote: Kedu otu esi ahọrọ igwe eletriki eletrik?